၂ဝ၁၆ ခုနှစ်မှ ၂ဝ၁၈ ခုနှစ်ထိ သုံးနှစ်အတွင်း နေပြည်တော်တွင် အဝေးပြေးယာဉ်အစီးရေ ၈ဝဝဝ တိုးလာသေ? - Yangon Media Group
၂ဝ၁၆ ခုနှစ်မှ ၂ဝ၁၈ ခုနှစ်ထိ သုံးနှစ်အတွင်း နေပြည်တော်တွင် အဝေးပြေးယာဉ်အစီးရေ ၈ဝဝဝ တိုးလာသေ?
နေပြည်တော်၊ ဧပြီ ၅
၂ဝ၁၆ ခုနှစ်မှ ၂ဝ၁၈ ခုနှစ်ထိ သုံးနှစ်အတွင်း နေပြည်တော်တွင်အဝေးပြေး ယာဉ်အစီးရေ ၈ဝဝဝ တိုးလာ သော်လည်း ခရီးသည်ဦးရေခြောက် သောင်းကျော်ခန့်လျော့ကျသွား ကြောင်း နေပြည်တော်မော်တော်ယာဉ်လုပ်ငန်းပေါင်းစုံထိန်းသိမ်း ရေးကော်မတီ(အဝေးပြေး)မှ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဝင်းဆွေက ဒီမိုကရေစီတူဒေးသို့ ပြောသည်။
”၂ဝ၁၆ ခုနှစ်က နေပြည် တော်မှ တိုင်းဒေသကြီးပြည်နယ်များသို့ အဝေးပြေးမော်တော်ယာဉ်လိုင်းများမှ ပြေးဆွဲနေတဲ့ မြို့ ပေါင်း ၄၇ မြို့ရှိပြီး မော်တော် ယာဉ်စီးရေ ၉၂ဝဝဝ ရှိတယ်။ ၂ဝ၁၇ ခုနှစ်မှာ ၉၅ဝဝဝ နဲ့ ၂ဝ၁၈ ခုနှစ်မှာ ၁ဝ၂ဝဝဝ ရှိတယ်။ ခရီး သည်အနေနဲ့ ၂ဝ၁၆ ခုနှစ်မှာ ၁၇ သိန်း ခုနစ်သောင်း၊ ၂ဝ၁၇ ခုနှစ်မှာ ၁၇ သိန်းသုံးသောင်း၊ ၂ဝ၁၈ ခုနှစ်မှာ ၁၇ သိန်းတစ်သောင်းရှိတယ်။ ဒီတော့ ၂ဝ၁၆ ခုနှစ်မှ ၂ဝ၁၈ ခုနှစ်ထိ သုံးနှစ်အတွင်း ယာဉ်အစီးရေ ၈ဝဝဝ တိုးတယ်။ ဒါပေမဲ့ ခရီးသွားတဲ့ခရီးသည်ဦးရေက ခြောက်သောင်းကျော်ခန့်လျော့ ကျသွားတယ်။ ခရီးသည်စီးနင်း သွားလာမှုကျဆင်းလာခြင်းအနေ အထားအရ အရှုံးမပေါ်ပေမယ့် ကောင်းလိုက်မကောင်းလိုက်ပဲ။ ပွင့်လင်းရာသီဆိုရင် ခရီးသည် သွားလာမှုပိုသွားတယ်”ဟု ၎င်းကပြောသည်။
၂ဝ၁၆ ခုနှစ်တွင် နေပြည် တော်မှ တိုင်းဒေသကြီး ပြည်နယ် များသို့ နေပြည်တော်ဘောဂသီရိ ကားဝင်းမှ အဝေးပြေးမော်တော် ယာဉ်လိုင်း ၁ဝ၄ လိုင်းတို့က တိုင်း ဒေသကြီးပြည်နယ်များရှိ ၄၉ မြို့ သို့ ရန်ကုန်-မန္တလေးလမ်းဟောင်း နှင့် အမြန်လမ်းတို့မှ ပြေးဆွဲလျက် ရှိရာ အများဆုံးရန်ကုန်နှင့်မန္တလေး ဘက်သို့ တစ်နေ့လျှင် မော်တော် ယာဉ်အစီးရေ ၂၈ဝ နှင့် ၃၅ဝ ကြား ပုံမှန်ပြေးဆွဲပေးလျက်ရှိ ကြောင်း သိရသည်။
မသန်စွမ်းမှု အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းနှင့် မှတ်ပုံတင်ခြင်းများ ဆောင်ရွက်သွားမည်
သင်္ကြန်ကာလအတွင်း မော်လိုက် ပျားစွဲဆင်စခန်း ပုံမှန်ရက်အတိုင်း ဖွင့်လှစ်မည်
အသက်အရွယ် အိုမင်းချိန်တွင် အကိုက်အခဲပျောက်ဆေး တစ်နေ့ တစ်လုံးသောက်ခြင်းက အန္တရာယ်များ
ရန်သူ့နယ်မြေမှ စစ်ခေါင်းဆောင်ကို ကာကွယ်ပေးရမည့် အမေရိကန်ဗိုလ်ချုပ် Hostiles ရုပ်ရှင်